Saxaafadda gudaha Finland - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Saxaafadda gudaha Finland
Finland waxaa ka jirta madaxbannaani saxaafadeed waxayna Finland sannado badan kaalinmaha hore ka gashay indegsiga xorriyadda saxaafadda. Shirkadda warbaahinta qaranka yacni Yle oo shirkadda adeegga warbaahinta dadweynaha ee madaxa bannaan, kaas oo kanaalladiisa aad ka heleyso macluumaadyo muhiim ah oo luqado badan ku qoran. Waxaa intaas dheer oo Finland ka jira warbaahinno badan oo la aamini karo oo gaar loo leeyahay. Hab saxaafadeedka wanaagsan waxaa ilaaliya islamarkaasna horumariya guddiga saxaafadda.
Wararka iyo barnaamijyada telefeshanka ee internetka
Shabakadda waxaad ka heleysaa warar iyo barnaamijyo badan oo luqado kala duwan ku baxa. Tusaale ahaan Yle wuxuu bixiyaa warar ku baxa af Finnish, Ingiriis iyo Ruush. Barnaamijyada janaalada Yle iyo kuwa ganacsiga ah waxaad ka sokow telefishinnada ka daawan kartaa shabakadda. Barnaamijyo tv oo badan ayaa ku baxa afka Finnishka. Barnaamijyada luqadaha qalaad waxaa Finland qoraal ahaan loogu turjumaa af finnish, yacni waxaa barnaamijyadaas kula socon kartaa xittaa luqaddoodi asalka ahayd.
Wararka afka ingiriiskaIngiriis
Wararka afka ruushkaRuush
Wararka ku qoran luqada finnishka ee fududuFinnish
Barnaamijyada telefishinka ee shabakaddaFinnish
Finland waxaa kasoo baxa jaraaido badan. Ka ugu wayni waa Jaraa’idka odhaahda Helsinki ( Helsingin sanomat). Badanaa jaraa’idadu waxay kusoo baxaan af finish. Qaarkood kale oo maxaliga ahina waxay kusoo baxaan afka iswidishka.
Waxaa suuraggal ah in la dalbado jaraa’idyo badan oo warqad ahaan u daabacan iyo weliba iyagoo shabakad internet ah. Markaas waxaa jaraa’idka akhrin kartaa isagoo elegtroonig ah.
Wargeysyada ka soo baxa FinlandFinnish
Wargeyska afka ruushka ee GazetaRuush
Hadii telefeshanka aad haysaa uu hayey kuwii hore aanad u baahan tahay inaad daawato barnaamijyada telefeshanka, waxaad u baahan tahay inaad hesho rasiivarm. Telefeshanada cusub ee imika Finland laga isticmaalo inta badan rasiivarku gudaha ayuu kaga diyaarsan yahay isaga dhijitaal ah.
Shirkadda warbaahinta qaranka, yacni Yle wuxuu leeyahay saddex kanaal oo telefishin ah, kuwaas oo laga arko Finland oo dhan. Yle waa adeeg dadweyne shaqooyinkiisa waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuurta. Ka sokow kan waxaa kale oo Finland ka shaqeeya telefishinno ganacsi ah, sida MTV3 iyo Nelonen.
Janalo badan waxaad ku daawan kartaa lacag la’aan. Kuwa bilaashka lagu daawado janalada Yle iyo qaar badan oo kale oo ah kuwa ganacsiga. Waxaa intaa dheer hadii aad rabtid waxaad iibsan kartaa janalada lacagta ah.
Telefishinka ka jira FinlandIngiriis
Finland in badan oo idaacado ah baa ka shaqeeya. Intooda badan waxaad ka dhagaysan kartaa xataa internetka. Inta badan kanaalada raadiyayaashu waxay ku baxaan af finnish.
Yle wuxuu soo saaraa barnaamijyo raadiyaha ka baxa oo af ingiriis iyo af ruush ah.
Kanaalada raadiyaha ee FinlandFinnish
Raadiyaha afka istooniyaankaEstoniyan
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 30.12.2021 Boggan war-celin ka soo dir